काठमाण्डाै उपत्यकामा थपिएको निषेधाज्ञामा के खाेल्न पाइन्छ, के खाेल्न पाइँदैन ? (सूचीसहित) | NEWZ PATI
काठमाण्डाै उपत्यकामा थपिएको निषेधाज्ञामा के खाेल्न पाइन्छ, के खाेल्न पाइँदैन ? (सूचीसहित)
काठमाण्डाै – काठमाण्डाै उपत्यकामा थप कडाइसहित जेठ २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएकाे छ । मङ्गलवार (आज) बसेको काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा एक हप्ता थप्ने र निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्दा बाहेक कोही पनि घरबाहिर निस्कन नपाउने र बिहान, बेलुकाको हिँडडुल पनि बन्द गरिएको छ ।
यस्तै सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, दोहोरी, फुटसल, जिमखाना र मानिसहरुको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ ।
विवाह, व्रतबन्धको हकमा बढीमा सात जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी आफ्नो घर वा बसेको ठाउँमा मात्र गर्न पाइनेछ ।
यस्तै पुजारीबाट हुने नित्य पूजाबाहेकका सबै धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास पसल बिहान नौ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ । खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरलगायत भने खोल्न पाइने छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायबाट यसअघि जारी गरिएका सबै पास रद्द गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
Previous: उपत्यकामा थपियो एक साता निषेधाज्ञा, अब किराना पसल पनि खोल्न नपाइने
Next: टाटा कम्पनीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका कर्मचारीको परिवारलाई नियमित तलब दिने